Isi > Mmega > Mgbatị ike egwu - olee otu ị ga-esi dozie
Ndị agha na-eguzogidebụ nnukwurụpụtangwá ọrụ ọ bụghị naanị n'ihi na ha dị oke ọnụ, na-ebugharị ma na-agbanwe agbanwe, mana n'ihi na ha nwere ike inye aka leba anya akwara buru ibu yana obere akwara na-eme ka ahụ sie ike.Mar 19 2021
You maara na ndị mbụ na-eguzogide ndị amata na 1896 mgbe onye Switzerland aha ya bụ Gustav Gossweiler tinyere akwụkwọ ikike maka ikike maka ngwa ọzụzụ na-agbanwe? Iji dochie ngwaọrụ ndị ọzọ dị ka 'akụrụngwa egwuregwu', Gustav tọrọ ntọala maka inweta ikike izizi site na nrụpụta ya ruo taa. Ee ee, ndị ahụ na-acha uhie uhie, ihe dị ka porta. ihe na-adịghị mma enwetala ezigbo ewu karịa afọ, ajụjụ bụ, ha na-ewu ahụ ike? Ka anyị buru ụzọ nweta ihe, abụ m onye mbido, nke dị mma, ị ga-ahụ nsonazụ na mpe mpe akwa.
Mbido, ị nọ n'udo. Ha ga-anabata ụdị ọ bụla mmega ahụ ọ bụla, gụnyere mmegharị ahụ. Ka anyị wepụ ihe ole na ole ndị ọzọ n’ụzọ.
Mpempe akwụkwọ dị mma maka ndị mmadụ na-agabiga ọgwụgwọ anụ ahụ, ndozi, na ndị agadi ka ha na-adị nwayọ nwayọ ime ihe, maka ọtụtụ akụkụ dị mfe ịchịkwa, ma dịkwa mfe ịme n'ụlọ. Ee ee, ndị otu egwu dị egwu nke agba niile dị na egwurugwu w nke nwere esemokwu dị iche iche nwere ike ịme ọtụtụ mmemme dị iche iche. Akwa! MA! Ugbu a anyi abiala n'ihe ọma.
Ọ nwere ike inye gị niile mara mma gainz? Anyị maara na nyocha na-egosipụtakarị uto nke uru ahụ na uru ike ma a bịa n'ihe banyere ndị mbido. Mana mgbe ị na-apụ na ihe ndị egwuregwu na-akpọ 'newbies', ọ dị ezigbo mkpa itolite na ị na-eji ibufe na-aga n'ihu ma na-akpali akwara gị nke ọma. Kedu ihe nke ahụ pụtara maka ndị agha? Nke mbu, kwuo obere ihe banyere physiology nke iku aru.
Ningdọ aka na ntị: sayensị na-agwụ ike n'ihu! Mkpokọta na-adị n'ime sarcomere site na iji teknụzụ filament na-agba ọsọ, bụ nke mmeghachi omume dị n'etiti ihe mgbochi na-eme actin na myosin na-etolite eriri mmiri. Isi nke eriri myosin na-adabere na eriri filament dị n'akụkụ ya ma mepụta ihe a na-akpọ 'akwa' wee dọpụta iko mmiri ahụ n'etiti etiti sarcoma ahụ. Ka ọ na-adọta, mkpumkpu akwara ahụ na-adị mkpụmkpụ wee si n'ụgbọ agha kwụ ọtọ gaa egbe égbè! Dabere na ogologo dị iche iche nke eriri anụ ahụ, ike ị nwere ike iwepụta ugbu a na-agbanwe.
Ọgbọ ike bụ nke kachasị ogologo oge n'ihi njikọ dị ala n'etiti ihe nkwekọrịta na obere. N'etiti etiti, ike kachasị elu mgbe imirikiti aka metụrụ. Ma ọzọ adịghị ike na nke kachasị dị mkpụmkpụ ebe ị na-agbanwe agbanwe n'ihi overlapping.
Were ọnọdụ a dị egwu dịka ọmụmaatụ. Otu nwa okorobịa na-adọta oji nke a raara eriri. Ka ọ na-atọpụ eriri ahụ, nwoke ọzọ kpebiri isonyere ya n'azụ ma nyere aka, nke na-eme ka traktị nwekwuo.
Ka ị na-adọpụ, ndị mmadụ na-enyere aka ma mepụtakwu ike! N'oge ụfọdụ, ha na-agbapụ ụlọ ụdọ wee malite ịlaghachi azụ. Mana ha amaghi na otu ozo na adokpu okwute ozo n’azu ha. Otu abụọ a batara n'ụzọ ibe ha, na-amanye ụfọdụ ndị, na nrụpụta ike na-ebelata.
Ugbu a tinye nke a na nrụpụta ike ike ma ị ga-ahụ eserese dị ka nke a: W siri ike na mbido, dị ike n'etiti, na adịghị ike ọzọ na njedebe. Amaghị m na nke a enweghị isi
Agbanyeghị! Ikekwe ị na-eche, sị, 'Olee otu ọkụ mmụọ nke a nwere ihe jikọrọ ya na ndị otu mgbagha?' Ọfọn
Mgbe m kọwasịrị ihe nke ahụ pụtara maka dumbbells ọdịnala gị! Ọfọn, ọ bụrụ na m ga-ebu ibu nke m nwere ike ibuli elu n'etiti ngagharị, ebe m kachasị ike ibu ahụ ka na-adịchaghị mma n'ihi na enweghị m ike ibuli ya maka ndị nnọchiteanya n'akụkụ kachasị ike nke mpaghara ahụ . N’ezie, nke ahụ pụtara na m ga-aga ije n’ụzọ dị mfe karị. Ma ugbu a ibu dị n'etiti dị oke oke ma ọ bụghị m ka m na-enweta ihe mkpali kachasị m mkpa itolite.
Ma abia na biceps curl, adighi m enweta otutu ihe mkpali na njedebe ma. Amaara m, amaara m, ekwuru m na na njedebe nke mbugharị, ị dịkwa ike, mana na nke a ihe a maara na biomechanics dị ka ogwe aka dị mkpụmkpụ nke pụtara akara nkwụsi ike dị nso na axis, na nke a ikpe nkwonkwo gị ma ọ bụ ikiaka. Obere oge ogwe aka, obere ike dị mkpa iji bugharịa ihe, yabụ na biceps curl anaghị ewepụta ike na njedebe.
Dịkwa mma, ugbu a, ka anyị lelee anya na ìgwè ndị na-eguzogide. Mgbochi nke eriri roba dị iche na nke ọdịnala ọdịnala. Moron! Ihe dị iche bụ na ọ bụrụ na ị na-ebugharị ihe dị iche iche, ka ị na-adọkpụkarị, nnukwu nguzogide ahụ.
bụ chickpea ntụ ọka dị mma
Na ụfọdụ akwara, ọkachasị akwara p nke siri ike, nwere ọtụtụ nguzogide, dịka nke a ebe ọ sitere na 50 ruo 125 pound nke ike, ihe fọrọ nke nta ka ọ bụrụ okpukpu atọ karịa site na mmalite ruo n'isi! Yabụ nke a bụ nnukwu ọghọm nke ndị otu na-eguzogide, yana eziokwu ahụ bụ na ị ga-eto site na ọkụ ọkụ ọkụ ngwa ngwa wee jiri ụdọ dị ike ga-esiri ike n'ihi na ọ ga-amalite ịdọkpụrụ gị kama ịdọba ya. Banyere uru, ọ dị ka ọ dị mma, mana naanị ruo n'ókè ụfọdụ Jide maka nkeji
Anyị maara na ibu nwere ibu mgbe niile, nke nwere ike ịdị mma, mana ọ pụtakwara na etiti ntụgharị dị iche iche enweghị nguzogide zuru oke iji mepụta ihe mkpali kachasị mma. Anyị makwaara na teepu dị mma n'ihi nrụgide na-aga n'ihu, mana dị ala na mbido ma sie ike na njedebe. Ya mere, gịnị ma ị jikọta ha? (Windows ta-da!) Nke ahụ ziri ezi! Dinggbakwunye band gị na ibu gị nwere ike ịbụ ụzọ kachasị mma iji wepụta ọdịiche dị na nrụpụta ike ike; nke ahụ pụtara ihe nkwalite, ụda olu dị ukwuu, na uru dị ukwuu! N'ezie, ọmụmụ ihe ahụ kwadoro ya, ebe a chọtara ya na ndị na-anwale ule mere ka nkwughachi ha kachasị elu na ike nke okpukpu abụọ karịa nke ndị agha karịa na naanị ibu. (Nsonaazụ nwere ike ịdị iche) Jiri teepu mee ihe site na iji ha mee ihe ugbu a.
Agbanyeghị, ọ bụrụ na ịhọrọ iji eriri n'onwe ha, ịnwere ike iji ha dị ka ihe na-ekpo ọkụ tupu ị banye n'ime ibu. Fọdụ ndị mmadụ na-ahụta na ọ bara uru ịgbakwunye mgbatị ahụ na mmega mmachi na njedebe nke ụbọchị na-agbanye olu ntakịrị ma mepụta mgbapụta dị arọ. Ma eleghị anya ị nwere ọbụna ụfọdụ ezigbo echiche ị ga-eji na ndị agha gị.
Kedu ihe bụ tempeh
Kedu ihe bụ eriri mgbatị ahụ?
Gymstick Power Bands bụ ihe na-emechi mmechi mmechi. Ha siri ike ma sie ike karịa ndị agha ndị ọzọ a na-ejikarị eme ihe. Enwere ike iji ụdọ ike maka ike na ọzụzụ ike, ọsịsọ na ọzụzụ agility, jumping na plyometricomume, mgbanwe na mmegharị nkwonkwo.
Nwere ike ịdọrọ ndị otu mgbochi?
Ma ọ ga-ekwe omume iji ya rụọ ahụ ikendị na-eguzogide ndị agha. Ọ bụghị naanị ndị aìgwèebugharị ma dị mfe ịrụ ọrụ, ha na-arụ ọrụ nke ọma mgbe ọ bịara na-ewusi ma nweta ahụ ike.Ndị agha na-eguzogidewuo akwara n’otu uzo dika igwe n’efumee.
Ngwongwo ike ha dị mma maka iwulite ahụ ike?
Ndị agha na-eguzogidenwere ike tinyeike-ewuli elu ikeka ọtụtụ ụdị nke mgbatị. Ha dịkwa mma maka ịhazigharịmọzụlụmgbe mmerụ ahụ gasịrị.Ndị agha na-eguzogidebia n'ọtụtụ ike, na-eme ka ọtụtụ ndị jiri ha nke ukwuu.
Ndị agha na-eguzogide na-eme ka ụsụ gị buru ibu?
Na-eme ìgwè ndị aghaMee Akwara? Eeh, mana enwere nwudo. 'Booty gbalagaomume na-enyere aka iche ma lekwasị anya, wee si otú a rụọ ọrụ,iheobere akwara na-atọ ọchị: glute minimus and glute medius, 'ka o kwuru. Nke a bụ karịsịaiheikpe ma ọ bụrụị na-karia onye mbido nke na-ejitụbeghị ha.20.08.2019
Ọmụmaatụ,dị ka dumbbells, iguzogideìgwènye usoro nguzogide iji nyere mọzụlụ gị adọka ma sie ike. Otú ọ dị, n'adịghịmkpọchi, iguzogideìgwèjigide mgbatị ahụ na akwara mgbe niile na mmega ahụ niile, yabụ mepụta uto ahụ, Zocchi gwara anyị.03.12.2020
Ego ole ka ndị agha na-agbakwunye na ọnwụ?
Ọ bụrụ na ịịnwụ anwụn'etiti 400-500lbs m ga-atụ aro iji nke agbalagamakandị nwụrụ anwụ. Ọganye ihe dika 50-80lbs nke nguzogide ozo na ngwụcha ngwụcha ngwụcha ngagharị.Jul 18 Dec 2019
Ego ole ka ndị agha na-agbakwunye squat?
Attaching eguzogideìgwèka a smith igwe ma ọ bụ barbell iji asquatogbe nwere iketinyedikaukwuudị ka kilogram 170 nke iguzogide mbuli, dabere na nha nkegbalaga. Ala dị ala bụ mgbeìgwèbụ ndị na-erughị eru, ọkwa dị elu bụ mgbegbalagaagbatịkwuo.
Enwere m ike iji ndị agha na-eguzogide kwa ụbọchị?
Otunwere ike iguzogideọzụzụkwa ụbọchị. Enwere ihe karịrị akwara 600 na ahụ mmadụ ọ gaghị enwe ike ịzụ ha niile n'otu oge. Zọ kachasị mma iji zụọ ọzụzụ bụ kewaa usoro gịejidị iche iche akwara dị iche ichekwa ụbọchị.Nguzogideọzụzụnwere ikeenyere gị aka inweta ma ọ bụ idalata dabere na ebumnuche gị.
Kedu ihe squat na band?
Squatna-eguzogideìgwèna-eleba anya n'ọgba, quadriceps (apata ụkwụ), na akwara addu hip. Mkpụrụ obi nke abụọ nke a na-agụnye azụ na isi, nke ahụ gị chọrọ maka nhazi na nkwụsi ike (3, 4, 5, 6).24 nke 2020bọchị 2020
Kedu ụdị mmega ị nwere ike iji eriri igwe?
Omume Band Band 1 Chest Press 2 Punch Punch 3 Band Wepụ Aka 4 Pushups
Kedu otu esi eme ndị agha na-eguzogide ahụ?
Ntughari Nguzogide Nguzogide Maka Nlekọta Isi nke 1 1 Squat: 10-12 ugboro ugboro x 3 set. Guzosie ụkwụ abụọ gị abụọ n'obosara n'ubu. 2 Jubu Press: 10-12 ugboro ugboro n'akụkụ ọ bụla x 3 set. 3 Deadkwụ Nwụrụ Anwụ kwụ ọtọ: 10-12 ugboro ugboro x 3 set. 4 Mgbatị Tricep Mgbatị: 10-12 ugboro ugboro n'akụkụ ọ bụla x 3.
Ọ dị mfe ịmalite site na ike ike?
Nke a bụ ụzọ kachasị mfe iji bido n’ìgwè Ndị Ike Anyị, mmega ndị a na-emepe ụzọ maka inweta nnukwu ike & nkwupụta ụda; zuru ahụ ike.